ဒူဘိုင်းမှ ဂျမေကာသို့ Emirates Codeshare တွင်ရောင်းရန် | ဂျ
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » နိုင်ငံ | တိုင်းဒေသကြီး » ဂျမေကာ » Emirates Codeshare တွင် ဒူဘိုင်းမှ ဂျမေကာသို့ ရောင်းရန်ရှိသည်။
လေကြောင်းလိုင်း • လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ကာရစ်ဘီယံ • ခရီးလမ်းဆုံး • အစိုးရသတင်းများ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဂျမေကာ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု • ကြေးနန်းသတင်း
(HM Emirates Airline) ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett (ညာ) သည် ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ Emirates Airline & Group ၏ တော်ဝင်တော် Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum နှင့် ယနေ့ (မေလ ၁၀ ရက်)တွင် ဒူဘိုင်းရှိ Arabian Travel Market ၌ စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက် အစည်းအဝေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ နှစ်ပတ်လည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံနှင့် ပြပွဲ (AICE) 10 နှင့် ဂျမေကာသို့ ပျံသန်းမည့် Emirate လေကြောင်းလိုင်း၏ ခရီးစဉ်သစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ - Jamaica ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ရုပ်ပုံအားလျော်စွာ
ဂျမေကာနှင့် ကာရေဘီယံတို့အတွက် သမိုင်းဝင် ပထမဆုံးသော ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများတွင် အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော Emirates လေကြောင်းလိုင်းသည် ယခုအခါ ဂျမေကာသို့ ထိုင်ခုံများကို ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ဝင်ပေါက်များအာရှနှင့် အာဖရိကမှ ဂျမေကာနှင့် ကျန်ဒေသတို့ ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett တို့ရဲ့ အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေအပြီးမှာ ဒီနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဂျမေကာရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ Emirates Airline & Group မှ အရာရှိကြီး Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ဒူဘိုင်းရှိ Arabian Travel Market (ATM) ၌ တာဝန်ရှိသူများ၊
ဤခိုင်မာသောသဘောတူညီချက်သည်9ခုနှစ်၊ မေလ 12 ရက်မှ 2022 ရက်အထိကျင်းပသည့်အာရေဗျခရီးသွားစျေးကွက်တွင်ဂျမေကာ၏ပထမဆုံးပါဝင်မှု၏အဓိကရလဒ်ဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီး Bartlett ၏ ပြောကြားချက်အရ
“အာရှနဲ့ မြောက်အာဖရိကကနေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတံခါးပေါက်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးနေတဲ့အတွက် ဒါဟာ ဂျမေကာအတွက် အဓိကကျတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။”
"Destination Jamaica သည် GCC လေကြောင်းလိုင်း၏ လက်မှတ်ရောင်းချမှုစနစ်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက်ပြီး ဦးတည်ရာသို့ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုညှိနှိုင်းရန် Jamaica Tourist Board (JTB) ကို သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပေးပါသည်။" ၀န်ကြီး Bartlett နှင့် ခရီးသွားလာရေးဒါရိုက်တာ Donovan White တို့သည် Expo 2021 ဒူဘိုင်းသို့ ပထမဆုံးလာရောက်လည်ပတ်သောအခါတွင် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ခဲ့သည်။
Norman Manley နှင့် Sangster International Airports နှစ်ခုလုံးကို ယခုအခါ လေကြောင်းလိုင်းစနစ်တွင် စာရင်းသွင်းထားပြီး လက်မှတ်စျေးနှုန်းများကို လျော်ညီစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ လေကြောင်းလိုင်းများသည် JFK၊ New York၊ Newark၊ Boston နှင့် Orlando အပါအဝင် ရွေးချယ်စရာများဖြင့် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုသည် အီတလီနိုင်ငံ၊ Malpensa မှတစ်ဆင့် ဥရောပဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Emirates အားလပ်ရက်များတွင် ပျံသန်းမှုများကို ရောင်းချပေးပါသည်။
ဝန်ကြီး Bartlett ၏ ဒူဘိုင်း ခရီးစဉ်သည် နယူးယောက်၊ အာဖရိက၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပနှင့် လက်တင်အမေရိကတို့တွင် ရပ်နားမှုများ အပါအဝင် ကျွန်း၏ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကြီးမားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ခရီးစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။
SubscribePrintအီးမေးလ်လိပ်စာမိတ္တူတွစ်တာFacebook ကLinkedIn တို့ကွေးနနျးစာVKmessenger ကိုWhatsApp ကိုစာတိုRedditFlipboardPinterestTumblr သည်XingShare
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ Codeshare သဘောတူညီချက်
FICCI သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒရိုက်ကို မြှင့်တင်လာမည့်...
ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှု ဖူးခက်ဟိုတယ် ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း...
ဂရမ်မီဆုရှင်သည် ဘာဘေးဒိုးစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့် ဇာတ်ခုံကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံမှ သတင်းစကား
အာဖရိကတွင် COVID-19 ကူးစက်မှု ဆက်တိုက် ကျဆင်းနေသည်။
Narai Hotel Bangkok မှာ ပြောပြစရာ အံ့ဩစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကိရိယာများအတွက် ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာသည်။
ရုရှား ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှု အရှိန်မြင့်လာသည်။
World of Hyatt- အားလုံးပါဝင်သော အပန်းဖြေစခန်းအသစ် 100 အနီရောင်...
အနောက်သြစတေးလျသည် ခရီးသွားပွဲများအတွက် ဒေါ်လာ ၃၁ သန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့သည် နှစ် 20 ပြည့်အထိမ်းအမှတ်...
အမေရိကန်ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းအသင်းမှ ကြေငြာချက်...
ဘိုလီးဗီးယားတွင် လူလေးဦး နင်းမိသေဆုံးပြီး ၈၀ ဒဏ်ရာရရှိ...
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ရွက်လှေရောင်းချမှု တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည် - Breaking News ဇြန္လ 30, 2022
Grand-pre အမျိုးသားသမိုင်းဝင်နေရာ 2022 ခရီးသွားရာသီ - သတင်းများ ဇြန္လ 30, 2022
ကားသိုလှောင်မှုအတွက် Airbnb - ဆန်းသစ်သောသတင်း ဇြန္လ 30, 2022
Fort Lauderdale မှ Rotterdam သို့။ Holland America Line 150th Jubilee Transatlantic Crossing - Breaking News ဇြန္လ 28, 2022
Amazon နှင့် LG တို့သည် 'Alexa For Hospitality' တွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည် - Breaking News ဇြန္လ 28, 2022
Wyndham သည် Revenue Management System အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် - Breaking News ဇြန္လ 28, 2022
Four Seasons သည် Xi'an ရှိ Luxury Hotel ကိုကြေငြာခဲ့သည် - Breaking News ဇြန္လ 28, 2022
Moxy Chattanooga Downtown Hotel Garners ဆုသုံးဆု - Breaking News ဇြန္လ 28, 2022
ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလာရေးဌာန - Abu Dhabi နှင့် UNESCO တို့သည် COVID-19 ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇြန္လ 28, 2022
လေကြောင်း စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပူတင်၏ သွေးစွန်းသော ပန်းပုရုပ် ဇြန္လ 28, 2022
bufferမိတ္တူအီးမေးလ်လိပ်စာFacebook ကFlipboardhacker သတင်းများလိုင်းLinkedIn တို့messenger ကိုရောနှောPinterestအိတ်PrintRedditစာတိုSubscribeကွေးနနျးစာTumblr သည်တွစ်တာVKWhatsApp ကိုXingYummly